1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (iWCED) likubeke phambili ukunika uqeqesho bonke ootitshala beBakala 8 no-9 be-Life Orientation (boLwazi ngezoBomi) kuCwangciso lwaMakhondo oMsebenzi (Career Planning).
2. Uqeqesho luya kuqhubekela e-Cape Teaching and Leadership Institute (CTLI) kwithuba leentsuku ezimbini.
3. Injongo yale ngcaciso imfutshane kukwazisa bonke ootitshala boLwazi ngezoBomi (Life Orientation) beBakala 8 no-9 ukuba olu qeqesho lungentla luya kuqhubeka ngokulandelayo:
NgoMvulo, 03 Julayi – ngoLwesibini, we-04 Julayi 2017 Uqeqesho luya kuqhubeka iintsuku eziyi-2.
NgoMvulo nangoLwesibini: 08:30-16:00
4. Inkqubo yokubhalisa
5.1 Kuya kuhlawulwa isibonelelo sohambo, phantsi kwale miqathango ilandelayo:
Umgama uwonke ohanjiweyo kwithuba leentsuku eziyi-2 mawudlule kwi-100 km, o.k.t. ubuncinane kwi-50 km yohambo lokuya nokubuya ngosuku ngalunye.
Umgama uwonke ohanjiweyo kwithuba leentsuku ezi-2 mawungadluli kwi-280 km, o.k.t. ungadluli kwi-140 km yohambo lokuya nokubuya ngosuku ngalunye. Abathathi-nxaxheba abagqithisayo kulo mgama abasayi kwenzelwa mbuyiselo yemali (will not be reimbursed) ngomgama ongaphezu kwe-280 km ohanjiweyo yaye bayacetyiswa ukuba babhalisele indawo yokulala endaweni yoko.
5.2 Izicelo zamabango ohambo ziya kuhlolwa ngokwezi khrayitheriya zilandelayo:
Usetyenziso lweklabhu yelifti (ehlawulwayo okanye eyasimahla) kwimoto Kuphela ngumqhubi okanye umnini-moto onokwenza isicelo sebango leekhilomitha ezihanjiweyo. Makwenziwe uluhlu lwabakhweli.
Usetyenziso lwebhasi yesikolo Isikolo masifake ileta echaza ukuba kwakusetyenziswe ibhasi yesikolo ukuya kule khosi, amagama abakhweli kunye nomgama ohanjiweyo.
Akusayi kusetyenziswa umthamo wenjini.
Inyathelo 1) Isikolo masifumane iikoteshini zibe ntathu phambi kokuba kuqhubeke uqeqesho.
Inyathelo 6) Ukwenzela ukuba kwenziwe imbuyiselo kwisikolo, isikolo eso masifake ileta kumphathi ojongene nezicelo wesithili echaza ukuba kusetyenziswe umboneleli-nkonzo kuze kudweliswe amagama abakhweli kwaneenkcukacha zomgama ohanjiweyo. Makuqhotyoshelwe iikoteshini, imvume yomququzeleli weGET kwane-invoyisi yokugqibela ehlawuliweyo.
I-WCED iya kubuyisela imali isikolo KUPHELA sisakuba sifumene amaxwebhu asayiniweyo, kuqukwa nemvume ebhaliweyo ekhutshwe kwangaphambili yomququzeleli weGET wesithili.
Akuvumelekile ukuba kwenziwe izicelo zamabango zamaxabiso eeteksi ii-metered taxis.
6. Indawo yokulala nokutya
6.1 I-WCED iya kubonelela ngendawo yokulala nokutya e-CTLI ootitshala abasuka kwizithili zasemaphandleni kuphela, phantsi kwale miqathango ilandelayo:
Umgama wokuya kwindawo ekuqhutyelwa kuyo uqeqesho mawudlule kwi-50 km ukuya kwicala elinye, o.k.t. ibe ngumgama we-100 km ukuya nokubuya.
Ubhaliso malwenziwe lugqitywe kwangethuba elingaphambili.
6.2 Kuya kufumaneka indawo yokulala ukususela ngomhla wokuqala ukuya kutsho kumhla wokugqibela wekhosi yoqeqesho, kukho nokukhetha ukutshekhina ngo-14:00 nango-17:00 ngosuku olwandulela ukuqala kukamasifundisane.
7. Indlela yokufaka isicelo sebango
7.1 Bonke ootitshala abanqwenela ukufaka isikhalazo mabazalise le Fom yeeNkcukacha zeBhanki (Bank Details Form) iqhotyoshelweyo bayifake kwi-ofisi ejongene namabango kwindawo ekuqhubekela kuyo uqeqesho ngosuku lokuqala. IFom yeeNkcukacha zeBhanki (Bank Details Form) mayifakwe isitampu yibhanki kufakwe kuphela ifom engelokhutshelo (original). Azisayi kwamkelwa iifeksi okanye iifotokopi. Ootitshala mabazalise le fom PHAMBI kokuba luqale uqeqesho (oko kukuthi, fika kwindawo yendibano nale fom seyizalisiwe).
7.2 Zonke izicelo zamabango mazikhatshwe ngamaxwebhu angelokhutshelo (original documentation). Azisayi kwamkelwa iifeksi okanye iifotokopi.
7.3 Abenzi bezicelo zamabango baya kuhlawulwa imbuyiselo yemali kuphela emva kokugqitywa kwekhosi yoqeqesho yaye, ngoko ke, kuya kufuneka ukuba bazihlawulele ngokwabo iindleko zabo kwasekuqaleni. Apho kuyimfuneko, kucelwa izikolo zincedise ootitshala bazo ngokuphathelele koku. Makugcinwe ubungqina beentlawulo ezenziweyo.
7.4 Imbuyiselo yemali iya kwenziwa kuphela emva kokuqatshelwa ngobunono kwezicelo zamabango, yaye iWCED inelungelo lokwenza isigqibo sokugqibela apho kukho ukungangqinelani okanye ukungathotyelwa komgaqo.
7.5 Zonke izicelo zamabango mazifakwe kwindawo yoqeqesho apho amagosa aya kufumaneka khona ukunceda abenzi bezicelo zamabango.
7.6 Azisayi kwamkelwa izicelo zamabango ezifike emva kwexesha okanye ezineenkcukacha ezingaphelelanga, ngaphandle kokuba kukho iimeko ezixolelekayo ngakumbi, yaye imbuyiselo yemali ayinakuqinisekiswa (not guaranteed).
9. Kucelwa iinqununu zazise okukule ngcaciso imfutshane bonke ootitshala boLwazi ngezoBomi bamaBakala 8 no-9 ukuze bakuthathele ingqalelo.
IsiHlomelo A: "Registration form" (ubukhulu: 29 KB)